January 2011 ~ Nyi Nay Min (Reshare IT knowledge)
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com. Tuesday, January 25, 2011
အရင်ကလဲပြောပြထားပြီးသားပါ ဒါပေမယ့် မတူပါဘူး . အရင်ပေးတဲ့နည်းကတော့ Download လုပ်တဲ့သူများလို့လား မသိပါဘူး . ပိုက်ဆံပေးမှ Download လုပ်လို့ရမယ် ဖြစ်သွားရောဗျာ . နည်းတွေကတော့ အများကြီးပါ . ဒါပေမယ့် ကောင်းတဲ့နည်းလေးကိုပဲ ပေးလိုက်ပါ့မယ် . စမ်းကြည့်လိုက်ပါ အဆင်မပြေတော့လဲပြောပေါ့http://upload9.fileflyer.com/filefetch ကိုသွားပါအဲ့မှာ အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပါတယ် . Enter the URL of the file you would like to upload: ဆိုတဲ့အကွက်မှာတော့ မိမိ Download လုပ်မယ့် ဖိုင်ရဲ့ URL address ကိုထည့်ရပါမယ်။ Enter your email address to receiveanotification when the file is uploaded: ဆိုတဲ့အကွက်မှာတော့ မိမိ email လိပ်စာပေါ့. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ I agree to Terms of Service ဆိုတဲ့နေရာလေးကို အမှန်ခြစ်လေးခြစ်ပေးပြီးတော့ Fetch ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ .မကြာခင်မှာ မိမိထည့်လိုက်တဲ့ email လိပ်စာထဲကို Download လုပ်ဖို့ link ၀င်လာပါ့မယ် . ၀င်လာမယ့်ပုံစံကYou can click on the following link to retrieve your file: http://www.fileflyer.com/view/gNChjBO အဲ့လိုဝင်လာမှာပါ . အောက်က http://www.fileflyer.com/view/gNChjBO ဆိုတာ မိမိ Download လုပ်မယ့် Link ပါပဲဗျာ . အဲ့ဒီ့ Link လေးကိုနှိပ်ပြီး Download ကိုသာရွေးပေးလိုက်ပါ .အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
lenovo ideapad u330 driver for window xp
Laptop Driver များ, Lenovo Drivers
spyboy.htet90: ကိုညီရေ ကျွန်တော့် လပ်တော့ က lenovo ideapad u330 ပါ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် laptop က window7ပဲသုံးလို့ရတယ် Xp သုံးရင် Driver တွေက ဟိုမသိဒီမသိတွေနဲ့ဖြစ်နေတယ် အစ်ကိုရ lenovo site ကပေးထားတဲ့ u330 Xp Driver တွေဆွဲပြီးတင်တော့လဲအဆင်မပြေဘူး ကျွန်တော် က XP ပဲသုံးချင်တာဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာလေး တစ်ချက်လောက် လမ်းညွန်ပေးပါအစ်ကိုအောက်မှာရှိတဲ့ link ကနေ Download လုပ်ပြီးတော့ ပြန်စမ်းကြည့်ပါဦး . ကျွန်တော် လုပ်တုန်းကတော့ အဆင်ပြေပါတယ် . Lenovo IdeaPad U330 Intel Chipset driverRealtek High Definition Sound Audio DriverLenovo IdeaPad U330 ATI Graphics Video VGA DriverLenovo IdeaPad U330 Broadcom Ethernet DriverIntel Wireless WiFi Link WLAN DriverLenovo IdeaPad U330 Motorola Modem DriverLenovo IdeaPad U330 Broadcom Bluetooth DriverLenovo Easy Camera Driver for Windows XPRICOH Flash Media Controller DriverLenovo Energy Management DriverSynaptics Pointing Device Driver for XPSecond Display Control XP Driver DownloadLenovo IdeaPad U330 CIR Driver Read More
ကိုညီရေ- အောင်မိုးးWINDOWS XP Genuine ဒေါင်းလို့မရလို့- ဖြစ်နိုင်ရင် mail ကနေဘဲ ပို့ပေးပါနော် ... တင်ပေးလိုက်ပါပြီ- အောက်မှာ အဆင်ပြေသလိုသာ download လုပ်ပါ .Downlod mediafire | Download zshare | Download ziddu
tharlay.mgk@gmail.comးကိုညီနေမင်း ကျွန်တော် Guitar Pro5ရချင်လို့ပါ ခင်ဗျာ ကျွန်တော်
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ မသိလို့ပါ ...
ကျွန်တော်တော့ မတင်နိုင်တော့လို့ အဆင်ပြေသလိုသာ download လုပ်စေချင်ပါတယ် Download rapidshare
မေး nay lin aung - ကိုညီနေမင်းရေ . ကျွန်တော်က LENOVOG450 သုံးနေပါတယ် . DRIVER လေးရှာပေးပါခင်ဗျာကိုနေလင်းအောင်ရေ အောက်မှာ direct link ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် . ကလစ်သာနှိပ်လိုက်ပါ . သူ့ဟာသူ download link ကျလာပါလိမ့်မယ် .Lenovo G450 Chipset DriverIntel Chipset driver 9.0.0.1011Lenovo G450 Sound Audio DriverConexant Audio Driver 3.66.9.50Lenovo G450 Graphics Video VGA Driver (Intel)Intel Onboard Graphics Driver 6.14.10.5002Lenovo G450 Graphics Video VGA Driver (NVIDIA)NVIDIA Display Driver 6.14.11.8611Lenovo G450 Ethernet LAN Network DriverBroadcom Ethernet Driver 11.7.2.0Lenovo G450 Wireless LAN WLAN Driver (Broadcom)Broadcom Wireless LAN Driver 5.10.38.14Lenovo G450 Wireless LAN Driver (Intel)Intel Wireless WiFi Link Driver 12.2.0.11Lenovo G450 Bluetooth DriverBroadcom Bluetooth Driver 5.1.0.5400Lenovo G450 Webcam Camera DriverLenovo Easy Camera Driver 6.32.1018.17/ 5.8.50.6/5.8.0.8Lenovo G450 Card Reader DriverRealtek USB 2.0 Card Reader Driver 6.0.6000.75Lenovo G450 Energy Management DriverLenovo Energy Management Driver 3.0.3.0Intel Matrix Storage Manager Driver 8.8.0.1009Lenovo G450 Touchpad DriverAlps Pointing-device Driver 7.2.1602.309
မေးးsai tun - ကိုညီနေမင်း USB Safely Remove 4-4-2 key အသစ်လေးရှိပါသလား။ window7သုံးထားလို့ USB သုံးရတာ အဆင်မပြေလို့ပါ။ ရှိရင် ကူညီပါအုံး! version 4-4-2 ပါ။ကိုစိုင်းထွန်းခင်ဗျာ ကျွန်တော် ပြန်ပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . မြန်မာပြည်မှာရောက်နေတော့ ဖိုင်တင်ရတာကတော့ မလွယ်ဘူးဗျာ အတော်လေးကို ကသိကအောင့်နိုင်တယ် . အဲ့ဒီ့အတွက် အဆင်ပြေမယ့် Link ကသာ လုပ်ပါ ကျွန်တော် မနက်ဖြန်ကျရင် Link ပြန်ပြင်ပေးပါ့မယ် . အခုတော့ portable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် . တင်လို့အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ portable ကို ရအောင် ရှာပေးလိုက်ရတာပါ . Download ifile.it | rapidshare | zshare | mediafire | hotfile | ziddu | Megaupload